Ubume bendawo yokuthenga kwi-Intanethi | Martech Zone
NgoMgqibelo, Matshi 19, 2016 NgoMgqibelo, Matshi 19, 2016 Douglas Karr
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kuvavanywe Uluhlu lokucofa, Kroger kwiivenkile zokuthenga ezifumaneka kwi-Intanethi. Inkqubo yayingenasiphako, kunye netoni yezibonelelo kuthengiso lwevenkile. Kuqala, bendikwazi ukubukela uhlahlo-lwabiwo mali ngelixa ndongeza into nganye kwinqwelo yam. Ndikwazile ukubona ngokucacileyo yonke into ethengiswayo. Inkqubo ilandelele ezona mveliso zam ziqhelekileyo ndizithengileyo. Kwaye kundithathe imizuzu eli-10 ukuqhuba, ukuba neqela laseKroger lilayishe imoto yam, kwaye ujonge.
Ukuba bendinesikhalazo esinye esikhethekileyo ibiliqela elitshintshe iiclaussen pickles zeVlasic. Uqikelelo lwam kukuba umntu olayishe izinto endizithengileyo wayejonge kwicandelo lokukhetha endaweni yeefriji yevenkile. Owu ubuntu!
Lixabiso elincinci lokuhlawula, nangona! Akumangalisi ukuba iGrocery izakubetha ukwamkelwa kwamanani aphindwe kabini kwi2016:
I-40% yabathengi be-intanethi abathengisa kwi-intanethi bathi i-grocer yabo ephambili ayiniki i-eCom, ebonisa ukulahleka kwentengiso kunye namathuba okunyaniseka kwabo bathengisa ukutya
Iipesenti ezingama-64 zabo bazamile ukuthenga ezivenkileni kwi-Intanethi baya kutshintsha iivenkile zokuthenga ukuze bafumane amava amnandi edijithali
I-GenX, amadoda kunye nabo banabantwana ngamacandelo akhula ngokukhawuleza eGrocery kulo nyaka
The Ngo-2016 Ivenkile yokuThengisa kwi-Intanethi infographic yabelana ngedatha evela kwingxelo yakutshanje ye-Unata. Ingxelo ityhila imikhwa kwi-eCommerce ka-2016 kubandakanya: amadoda anomdla ngakumbi kwi-eGrocery, iGenX lelona candelo likhula ngokukhawuleza le-eGrocery kwaye abathengi abanabantwana banikwa i-Intanethi. Ndilungile kumdlalo wabantu!
tags: Uluhlu lokucofaInani labemieCommerceiigrogriIvenkile yokutyaIvenkile yokutyaophuma ukuyothengakrogerUluhlu lokucofa krogerIndawo yemarike yase krogerIvenkile ye-intanethi
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2016 ngo-7: 02 AM
Molo, Enkosi ngokwabelana ngebhlog emnandi kangaka ... .Best blog. Inqaku eliluncedo kakhulu. Ishishini lokutya kwi-Intanethi eIndiya likhula ngokukhawuleza Ndiyalithanda inqaku lakho kuba ngoku kwiintsuku wonke umntu ujonga itekhnoloji yakutshanje kwaye yenziwe lula.